Kismaayo News » Cabdirishiid Xiddig oo gilgiley siyaasadda dalka
Cabdirishiid Xiddig oo gilgiley siyaasadda dalka
Kn: Cabdirishiid Maxamed Xiddig ayaa maanta lasoo baxay miciyihiisa siyaasadeed, wuxuuna qarka u fuuley in uu xariiqo taariikh cusub dalka Soomaaliya kadib markii si diqli ah looga reeyey tartankii guddoomiyaha baarlamaanka.
Cabdirishiid Maxamed Xiddig oo dad badan aysan sidaasi miisaan siyaasadeed usii siineynin, ayaa maanta heley wax ku dhow boqol cod, halka laga rabay 139 cod in uu ku guuleysto.
Maxamed Cusmaan Jawaari oo la tartamayay ayaa heley 141 cod, sidaasina ugu guuleystey guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya.
Balse guul la’aanta maanta ku dhacday Xiddig waxa xiggi kara murugooyin siyaasadeed oo ku habsada dadka isaga sida adag ola dagaalamay ee guusha weeydaariyay.
Xiddig waxa uu taageero xooggan oo aan hagar lahayn ka heley madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, codadkii uu heleyna wali waa kuwa baarlamaanka dhex fadhiya, doorashooyin muhiim ahna waa ay dhimanyihiin.
Bari ayaa ugu soo horeysa waxaa la galayaa doorashada guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka, waxaana u taagan rag miisaan culus , waxaana la eegi doonaa sida ay wax u dhacaan.
Balse tartanka ugu adag waa kan madaxweynenimada , waana meesha ugu muhiimsan ee kala awoodsareynta siyaasada ay kasoo muuqan doonto.
Hadda waxa ay u egtahay in Shariif Xasan fursadiisii musharax madaxweyne ay hoos u dhacday maadaamaa uu Jawaari guddoomiye baarlamaan kusoo baxay, balse taasi micnaheedu ma ahan in raggii ay is hayeen ay guuleysanayaan.
Xiddig iyo Shariif Xassan wali waa ay heystaan boqolkii cod ee uu Xiddig heley, waxayna ugu shubayaan qof kasta oo ay isfaham siyaasadeed gaaraan, haddii qofkaasi uu sii heystey codad kale fursadiisa aad ayay u badantahay.
Dadka ay Shariif Xasan xulufada ahaayeen waxaa ka mid ah Ra’isulwasaare Cumar Cabdirishiid, balse dalka ayuu isaga dhuuntey si aysan saameyn ugu yeelanin waxa maanta dhacay, isaga marnaba ma uusan taageersanayn Xiddig maadaamaa ay Daarood isla yihiin, balse ma uusan dooneynin in uu Shariif Xasan xumaan u muujiyo.
Taasi ka masixi meyso eedda, waxaana laga yaabaa in ay galaafato.
Nusharixiinta fursadda leh waxaa ka mid ah Xildhibaan Cosoble oo wareeggii labaad soo gaaray sanadkii 2012-kii, balse waa siyaasad oo wax kasta laga filan karo.